लकडाउनमा पारस शाह केटीसँग जंगल चाहार्दै, को हुन् नयाँ यूवती ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनमा पारस शाह केटीसँग जंगल चाहार्दै, को हुन् नयाँ यूवती ?
काठमाडौ । पूर्व युवराज पारस शाह लकडाउनको समय पोखरामा बिताइरहेका छन् । पोखराबाट आफ्नो फेसबुकमा भिडियो र फोटो पोष्ट गर्दै आफ्नो पछिल्लो गतिविधिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
पारस शाहले पोष्ट गरेका स्ट्याटस देखि भिडियोहरुलाई लिएर धेरै खालका गसिपहरु समेत बने । कहिले सोनीका रोकायासंगको प्रसंग जोडिए भने केहि उनको व्यक्तिगत प्रसंग जोडिदै गसिपहरु बने । पारस शाह भने आफ्नो बारेमा बन्ने गसिपहरुले खासै फरक नपार्ने र आफु पनि यहि मिडियाका गसिपहरुले गर्दा वर्षौं सम्म दुख पाएको कुरा समय समयमा व्यक्त गर्दै समेत आइरहेका हुन्छन् ।
पारस शाहले आज भर्खर आफ्नो फेसबुकमा एक युवतीसंग जंगलमा रमाउदै गरेको तस्विर पोष्ट गरेका छन् । पारस शाह पछाडी छन् भने युवती अगाडी देखिन्छिन र यी दुई पोखरा वरपरको जंगलको हरियालीमा रमाउन गए झैं देखिन्छ । पारस शाहको दाह्री हेर्दा यो लकडाउनको बेलाको तस्विर भन्ने प्रष्ट हुन्छ तर ति युवती को हुन् भन्ने प्रष्ट छैन । पारस शाहले नखुलाउदा झन् गसिपको मसला बन्ने देखिन्छ ।
पारस शाहले सोनीकासंग केहि समय संगै बस्दा मिडियामा सोनीका र पारसको सम्बन्धको चर्चा नै बन्यो तर पारस शाहले सोनीकासंगको सम्बन्ध बारे कसैले बुझ्दैनन् भन्दै केहि बोल्न चाहेका थिएनन् । अहिले पारस शाह आफैले यी नयाँ युवतीसंगको तस्विर पोष्ट गर्दा झन् अर्को गसिप बन्ने देखिन्छ ।
पारस शाहले बौद्धिक धर्मालम्बीहरुसंग खिचेको तस्विरहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् तर आफु कुन ठाउँमा गएको र के का लागि गएको भन्ने खुलाएका छैनन् ।
अन्ततः विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदै सरकार
कोरोनाका कारण साउदीमा नेपाली पत्रकारको निधन
ऋण काढेर किनेको चामल उर्लेको भेलमा ज्यान फालेर जोगाएँ, तर खानै पाइएन'(भिडियो)